३०औं जागिर फेरेका ज्याक मा यसरी बने संसारकै धनीमध्ये एक
scheduleसोमवार आश्विन ८ गते, २०७५
एजेन्सी, २६ भाद्र । ई-कमर्शको दुनियाँमा परिचित नाम अलीबाबाका सह-संस्थापक तथा चीनका चर्चित व्यापारी ज्याक माले कम्पनी बोर्डको अध्यक्षको कुर्सी छोड्ने घोषणाले विश्वभरी नै चर्चा पाएको छ ।
५४ वर्षीय ज्याक माको पदत्याग बाहेक उनको व्यक्तित्व पनि सधै चर्चामा नै रहँदै आएको छ । आज हामी यी नै विख्यात व्यक्तित्व ज्याक माको बारेमा तपाईलाई पाँच रोचक तत्थ बताउन जाँदैछौं जुन सायद धेरैलाई थाहा छैन ।
चीनको एक गरिब परिवारमा जन्मिएका ज्याक माले आफ्नो करियरको शुरुवात एउटा अंग्रेजी शिक्षकको रुपमा गरेका थिए । शिक्षक सेवामा आवद्ध हुन अघि उनले ३० वटा नोकरीलाई रद्द गरिसकेका थिए । ती मध्ये एउटा नोकरी केएफसीको पनि थियो ।
कम्प्युटर ज्ञानको पृष्ठभूमि नभए पनि ज्याक माले दुई दशक पहिले आफ्नो अपार्टमेन्टमा अलीबाबाको नीव राखे । यसका लागि ज्याक माले आफ्ना केही साथीहरुसँग अनलाइन मार्केटप्लेसमा लगानीका लागि राजी गराए ।
फोर्ब्सको २०१७ को सूची अनुसार ज्याक मा चीनका तेस्रो धनाढ्य व्यक्ति हुन् । फोर्ब्सले उनको सम्पत्ति ३६ अर्ब ६० करोड डलर भएको बताएको थियो ।
४२० अर्ब डलरको कम्पनी अलिबाबामा ज्याक माको करिब नौ प्रतिशत लगानी छ । सन् २०१४ मा अलीबाबाले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक हिस्सेदारीको माध्यमबाट २५ अर्ब डलर जुटाएको थियो ।
ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर मंडे जस्ता शपिंग इभेन्टको माध्यमबाट ज्याक माले अमेरिकामा पनि आफ्नो रवाफ जमाएका थिए ।
ज्याक माले दश वर्ष पहिले नै आफ्नो उत्तराधिकारीको बारेमा विचार गर्न शुरु गरिसकेका थिए । सन् २०१३ मा बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि उनले मूख्य कार्यकारीको कूर्सी छोडेका थिए । त्यसपछि उनले ज्याक मा फाउण्डेशनको माध्यमबाट चीनका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने कामा शुरु गरेका थिए ।
अलीबाबाको संस्थापक साझेदारको भूमिकामा रहेको अवस्थामा अब ज्याक मा शिक्षातर्फ फर्किन चाहन्छन् । यही सिलसिलामा उनले ब्लूमबर्गलाई दिएको एक साक्षात्कारमा आफुले बिल गेट्सबाट धेरै कुरा सिकेको बताएका थिए ।
पछिल्लो वर्षको जनावरी महिनामा ज्याक माले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको आफ्नो भेटवार्ता राम्रो भएको बताएका थिए । भेटवार्ता पछि ज्याक माले आफु र ट्रम्प चीन अमेरिकाको सम्बन्ध मजबूत, बलियो मित्रता र अझ असल हुनुपर्नेमा सहमति भएको बताएका थिए ।
त्यस समय ट्रम्पले ज्याक मा एकजना महान् उद्योगपति भएको र उनले अमेरिका र चीन दुवैलाई माया गर्ने गरेको भन्दै तारिफ गरेका थिए ।
तर अहिले ज्याक मा यस्तो अवस्थामा कुर्सी छोड्ने घोषणा गर्दैछन् जब चीनका निर्माता र कारोबार अमेरिकाको साथ जारी व्यापार युद्धको कारण चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
ज्याक मा अत्यधिक चर्चामा रहने उद्योगपतिमध्ये एक हुन् । सन् २०१७ मा ज्याक माले अलीबाबा कम्पनी स्थापनाको वर्षगाँठमा आयोजित कार्यक्रममा स्वर्गीय माइकल ज्याक्शनको जस्तै कपडा पहिरिएका थिए ।
पछिल्लो वर्ष उनले अभिनयको दुनियाँमा पनि कदम राखेका थिए । ज्याक मा एउटा शर्ट फिल्ममा मार्सल आर्ट मास्टर जेट लीको साथमा देखा परेका थिए । उनी मार्सल आर्ट्सका फ्यान हुन् । उनी ३० वर्षभन्दा धेरै अघिदेखि ताई चीको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
ब्राजिलमा बुलेटप्रुफ कार, सुरक्षा कि प्रतिष्ठा ?
‘प्रत्येक पाँच सेकेन्डमा एक बालबालिकाको निधन हुन्छ’
वरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधार
दिनहुँ तरकारी बेच्ने लक्ष्मी छोराको साथ चाहन्छिन्
रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न यसरी अभ्यास गर्नुहोस् (अग्निशक्ति मुद्रा)
जिन्स खरिद गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
आइब्रो बाक्लो बनाउन अप्नाउनुहोस् यी उपाय
भित्तामा टाँसेको तस्बिरले पनि बिगार्न सक्छ तपाईंको भाग्य !
बीबीएल सर्जरी : किन बढ्दैछ नितम्ब बढाउने ट्रेण्ड ?
यी देश परे विश्व स्वास्थ्य संगठनको अल्छी देशको सूचीमा
को हो त एसियाको धनाढ्य ?
यी हुन् विश्वकै यी वृद्ध जापानी दम्पत्ति
जीवन शैली, मनोरञ्जन
२५ वर्ष पुग्न अघि अवश्य हेर्नुहोस् यी १० फिल्म, बदलिने छ जीवनप्रतिको धारणा
‘सेल्फी र ब्युटी एप्लिकेशनको प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक’
घरमा बनाउनुहोस् यी स्क्रब पेस्ट, पाउनुहुनेछ चम्किलो र नरम छाला
जीवन शैली, समाचार
उपन्यास र चलचित्रमा अपमान गरेको भन्दै बादी समुदाय आन्दोलित
ब्रेकअपपछि मित्र बन्न चाहानुहुन्छ भने भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती
हेर्नुस्, चेकमा लेखिएको भन्दा १ लाख बढी रकम निकालियो भन्दै प्रकाश अधिकारीलाई यस्तो गरियो
कालो ओठबाट छूटकारा पाउन अप्नाउनुहोस् यस्ता उपाय
टौदहमा नागपञ्चमी मेला, भक्तजनको भिड
जीवन शैली, मुख्य समाचार
३८ वर्षपछि स्वार्थसिद्धि र रवि योग बन्दैछ नागपञ्चमी, यसरी गर्नुहोस् पूजा
काठमाडौँ, ८ असोज । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुबाट गम्भीर लापरबाही भएको...
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर सार्वजनिक, कहाँ पुग्न कति लाग्ने ? सूचीसहित
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सार्वजनिक भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै आज भाडादर सार्वजनिक गरेको छ...
बलात्कारी बाबुले छोरीलाई भने– ‘मलाई फाँसी देउ’
काठमाडौँ, ८ असोज । सुन्दा फेरि पनि अचम्म लाग्न सक्छ । बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरे भन्दा । तर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११...
बाबुले नै छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भपतन गराएपछि…
सराेगेसीमार्फत मातापिता बनेका बलिउड स्टारहरू
एजेन्सी, ७ असोज । अहिले सन्तान जन्माउने जत्तिकै सरोगेसी प्रवृधि पनि फस्टाउँदै आएको छ । यहाँसम्म कि बलिउडमा पनि त्यस्तो धेरै...
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्नातकले यसरी पाउँछन् सस्तो ब्याजदरमा ऋण (कार्यविधिसहित)
काठमाडौं, ७ असोज । गज्जबका योजना हुँदाहुँदै पनि लगानीको अभावमा कुनै उद्यम सुरु गर्न सक्नुभएको छैन ? यदि लगानीको समस्या छ र...
सांसद बन्न मरिहत्ते, ओलीलाई घेराबन्दी गर्न वामदेव कार्ड
काठमाडौँ, ८ असोज । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएपछि नेकपाका नेता (तत्कालीन एमालेका...
नागरिकको क्षमता अनुसार कर लिइयोसः अर्थमन्त्री
परासी, ७ असोज । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करका विषयमा देखिएका अन्योलतालाई समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । सङ्घ, प्रदेश...